RS ရှိသူတွေ ကျော်ကြီးကို အားကိုးကြပါ | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး RS ရှိသူတွေ ကျော်ကြီးကို အားကိုးကြပါ
ကျွန်တော်က ထွန်းလင်းပါ… အသက်ကတော့ ၂၅ နှစ်… စားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ စနေနေ့ ရုံးပိတ်ရက်လဲ ဖြစ်တယ်၊ မနက်စာကိုလဲ အိမ်မှာမစားချင်တော့တာနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော့်ဘော်ဒါ ကျော်ကြီးကိုလဲ သွားတွေ့တာပေါ့…
ကျွန်တော်။ ။ ဟာ ဟေ့ကောင် ကျော်ကြီး…
ကျော်ကြီး။ ။ လာကွာ… သားကြီး… မတွေ့ရတာတောင် ကြာပြီ… မင်းကြည့်ရတာ ပိန်သွားသလိုပဲ… အရင်အလုပ်မှာပဲ လုပ်နေတုန်းလား?
ကျွန်တော်။ ။ အေးကွာ… အလုပ်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီး ပင်ပန်းနေတာနဲ့ပဲ ဝိတ်တောင်ကျသွားတယ်… မင်းရော အဆင်ပြေတယ်မလား? မင်းကောင်မလေးနဲ့ရော အိုကေရဲ့လား? ဟဲဟဲ!
ကျော်ကြီး။ ။ ငါကတော့ မင်းလို ဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ မင်းလောက်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုဘယ်များမလဲကွာ! ငါ့စော်နဲ့ အဆင်ပြေလား? မပြေလား? ဆိုတာ ရုပ်ကြည့်တာနဲ့ မသိဘူးလားကွ… ငါတို့က အေးဆေးပဲ… မင်းသာ FA ကြီး ဂေါ်မစွံဖြစ်နေတာကွ!
ကျွန်တော်။ ။ အောင်မာ… ငါ့ကို FA ဆိုပြီး အထင်တော့ မသေးနဲ့ ဟိတ်ရောင်! ငါလဲ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ စမ်းသင့်တာ စမ်းပြီးသွားပြီကွ! တစ်ခုပဲ! ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ ကမောက်ကမဖြစ်တာလေးပဲ!
ကျော်ကြီး။ ။ တယ်ဟုတ်ပါလားကွ! ဘာအဆင်မပြေတာလဲ လင်းစမ်းပါဦး!
ကျွန်တော်။ ။ အဲ့ကိစ္စက ဒီလိုကွာ! မင်းလဲ သိတဲ့အတိုင်း ငါက ဒီကိစ္စကို စမ်းသပ်ဖို့လုပ်တုန်းကဆို ရောဂါမရသွားဖို့ ကွန်ဒုံးသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတော့ ငါ့မှာ ရှိတယ်ပေါ့ကွာ။ အဲ့မှာကြုံရတာက အပြင်မှာ ကွန်ဒုံးဝယ်ရတာ အဆင်မပြေတာတွေ၊ ပစ္စည်းပြတ်တဲ့နေရာက ပြတ်၊ နောက်ပြီး ပထမအကြိမ်ဆိုတော့ ရှက်တာက တစ်မျိုး။ အဲ့တာတွေကို မနည်းသည်းခံပြီး ကွန်ဒုံးရလာတော့လဲ နောက်တစ်မျိုးက ဒုက္ခပေးပြန်ရော! အဲ့ဒါက စစချင်း အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ သိတယ်မလားကွာ? သုက်လွှတ်မြန်ပြီး ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံနေရတာ… ပထမတစ်ခါတော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် နောက်အကြိမ်တော့မှာပါ ဒီလို ဖြစ်နေရင်တော့ ဒုက္ခပါပဲကွာ… မင်းက ဆရာကြီးဆိုတော့ အကြံကောင်းလေးရှိရင် ပေးစမ်းပါဦးကွာ…
ကျော်ကြီး။ ။ ဆရာကြီးဆိုပြီး မြှောက်တော့လဲ ပြောပြရတာပေါ့ကွာ… ဒါလေးများ.. လွယ်လွယ်လေး! ငါလဲ ဒီလိုမျိုးကြုံခဲ့ရတာပဲကွ… အတွေ့အကြုံမရင့်သေးလို့ သုက်လွှတ်မြန်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ရင်တော့ MOJO Control ကွန်ဒုံးကို စမ်းသုံးကြည့်ပါလားကွ! သူက ဘန်ဇိုကိန်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒချိတဲ့အခါ သုက်ကို ကြာကြာထိန်းထားနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုတယ်လေ… ငါ့တုန်းကတော့ MOJO Control ကွန်ဒုံးသုံးတာ အတော်လေး ဟန်ကျတယ်ကွ! ကြာကြာဆွဲနိုင်တော့ ငါ့ဆိုရင် တမ်းတမ်းဆွဲပေါ့ကွာ! အော်ဒါနဲ့ MOJO Control ကွန်ဒုံးကိုလဲ အပြင်က စတိုးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့မရရင် အွန်လိုင်းကနေလဲ ဝယ်လို့ရတယ်ကွ!
ကျွန်တော်။ ။ ဟာ ဟုတ်လား? ဘယ်နေရာတွေမှာလဲကွ?
ကျော်ကြီး။ ။ Shop.com.mm နဲ့ တခြားအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဝယ်လို့ရတယ်ကွ…
ကျွန်တော်။ ။ ခုလို ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပဲ သားကြီးရာ… ငါတော့ အွန်လိုင်းကနေပဲ မင်းပြောတဲ့ MOJO Control ကွန်ဒုံးကို ခုပဲ မှာလိုက်တော့မယ်ကွာ…
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးများကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အောက်ပါ့လင့်ခ်များမှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ…